Nleta 5 dị nso na Florence | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, Florencia, Italia
Florence bu ihe achoro anya ebe ozo, ebe obu obodo nkasi obi nke ndi Italia ebe i gha ahu oke oru nka na ebe ochie mara ezigbo mma. Mana gafee obodo a, enwere ebe ndị mara mma anyị nwere ike iburu n'uche. Ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ụbọchị, anyị nwere ike iji ụfọdụ n'ime ha lee obodo ndị dị nso, ebe Florence bụ obere obodo bụ ndị a na-eleta isi ha ozugbo.
Obodo a na-atọ ụtọ, mana anyị na-ahụ ya maa mma nkuku nke Tuscany ma ọ bụ ebe dị n'ụsọ oké osimiri nke nwere ike iwepụ ume anyị. Yabụ na anyị agaghị egbusi njem ahụ ma gakwuru obere ebe ndị a dị nso, dịka ha ga-abụ nchọpụta.
5 Saint Gimignano
Onye na-amaghị ụlọ elu nke Pisa? Obodo obere ọdụ ụgbọ mmiri a dị na mpaghara Tuscany, ọ bụkwa obere obodo, enwere ike ịga leta ya n'otu ụbọchị, tụmadị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị njem na-achọ ịse foto na-atọ ọchị na oflọ Elu nke Pisa. N'ebe a dị egwu, ọ bụghị naanị na anyị na-ahụ ụlọ elu ahụ, bụ nke ghọrọ onye ama ama maka iji nwayọ nwayọ nwayọ n'ihi na ọ na-enye ụzọ. Anyi nwekwara Duomo na Baptisty. Ọ bụ nnukwu ihe mara mma nke mara mma, nke a na-eme n'ụdị ha kpọrọ Pisan, mana nke ndị Romanesque kpaliri. N’otu obodo ahụ, e nwere ụka ndị ọzọ na-agbaso usoro a pụrụ iche, dịka Santa Chiara ma ọ bụ Santa Cristina. Ọ bụ obere obere obodo ahụ ka anyị nwere ike ileta ya na ihe ncheta ya n’ụbọchị, ma ọ dị kilomita 85 site na obodo Florence, yabụ ọ gaghị ewe anyị oge iru.
Nke a bụ obodo ọzọ dị naanị kilomita iri asaa site na Florence na nke nwekwara ọtụtụ akụkọ ntolite na okporo ámá ndị mara mma na ihe ncheta. Ya ụlọ ọrụ akụkọ E kwuwo na ọ bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa. Piazza del Campo bụ square dị n'etiti, na otu n'ime akụkụ anọ kachasị mma echekwara na Europe, ebe anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ mmegharị mgbe niile. O nwere ike ịbụ na ị maara ebe a, n'ihi na a na-eme Palio de Siena a ma ama ebe a, agbụrụ ịnyịnya nke chere ihu na mpaghara obodo ahụ.
La Katidral Siena ma ọ bụ Duomo Ọ bụkwa ụlọ nke nnukwu ịma mma malitere na narị afọ nke iri na abụọ, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ gara n'ihu na afọ ndị sochirinụ. N'ime ya ị gaghị echefu ịrịgo ịrị elu maka ihu igwe iji nwee echiche kacha mma banyere obodo ahụ. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị maka ọtụtụ ihe ncheta ma ịchọrọ ịzụ ahịa, ị nwere ike ịga Via Bianchi di Sopra, okporo ụzọ azụmahịa na nke ọtụtụ ndị njem.
Cinque Terre abụghị obodo ma ọ bụ obodo, mana dum ala gbara osimiri okirikiri nke anyị na-ahụ obodo nta ise dị na ugwu ma na-ele anya n'oké osimiri. Ọbịbịa a bụ ihe obi ụtọ maka uche, ebe ọ bụ na akwụkwọ ozi Cinque Terre siri ike ichefu. Obodo nta ndị na-akụ azụ ugbu a bụ ebe ndị njem nlegharị anya karị, nke anyị nwere ike iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'okporo ụzọ gbagọrọ agbagọ. N’elu ugwu dị elu anyị ga-ahụ ụlọ ndị mara mma, na-atọ ụtọ ma na-adọrọ adọrọ, anyị nwere ike ịfufu n’okporo ụzọ dị warara nke obodo ndị a pụrụ iche. Ndị a bụ obodo ise dị na mpaghara ihe dị ka kilomita 18 n'ụsọ osimiri, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola na Riomaggiore. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ezumike site n'obodo ndị jupụtara na mmadụ, ebe ha bụ obere obodo ndị dị n'ụsọ osimiri anyị nwere ike ịga na udo.
Ọ bụrụ na ihe nkiri ahụ masịrị gị 'N'okpuru Tuscan Tuscan', can nwere ike ịmịcha oge kachasị mma nke onye na-akwado ya n'obodo Cortona, ebe ọ bụ ebe a họọrọ ka ọ nọchite anya obodo dị jụụ n'ime ime Tuscany. Obi abụọ adịghị ya na a họọrọ ya nke ọma, n'ihi na nke a bụ kpọmkwem ihe anyị ga-achọta mgbe anyị rutere Cortona. Obodo ochie nke ndị Etrurian hibere, ebe a na-echekwa ụka ochie na okporo ụzọ ndị wara wara. Nwere ike ime a obere ọkara ụbọchị nleta, karịsịa dị ka a ebe ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ kasị ezigbo obi iru ala nke Tuscany. Dịka nleta, anyị nwere ike ịga ebe ụfọdụ mmasị dịka Hermitage nke sel ma ọ bụ Palazzo Comunale.
Obodo San Gimignano maara nke ọma na mpaghara Tuscan maka ya ụlọ iri na anọ ochie, nke anyị ga-atụkwasị na 58 ọzọ nke dị n'oge gara aga, ma wuo ya na ebumnuche nke igosipụta ike nke ezinụlọ kachasị emetụta. Taa ọ bụ World Heritage Site, na obere obodo ochie ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịga ije n'okporo ámá ochie. Obodo a dị ihe dị ka kilomita 60 site na Florence, anyị na-agakwa Siena, yabụ anyị nwere ike ịkwụsị obere ebe ahụ iji nwee ọ enjoyụ ụlọ ochie na ebe ndị dị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Florencia » Nleta 5 dị nso na Florence
Florence n'agbanyeghị ịbụ obere nwere 60% nke Renaissance art zuru ụwa ọnụ, anaghị ahụ ya ozugbo. Aga m agbakwunye Fiesole, Arezzo, Lucca, Asisi, Vinci, Castiglioncello, Viareggio, Forte dei Marmi na Island nke Elba. N'ezie, na Pisa enwere naanị onlylọ Elu dị ka ebe mmasị na ọtụtụ ụlọ Galileo. O doro anya na nke na-esote ga-aka gị mma!
Zaghachi Vicente esteban
Anglesey Island, Isle nke Druids